Semalt Expert: WordPress Vs. Shopify - Inona no tsara indrindra?
Ny ankamaroanareo dia mahafantatra fa ny WordPress no rafitra fanaraha-maso tsara indrindra sy malaza indrindra izay mihazona ny 60% -n'ny tsena amin'izao fotoana izao-ny ampahan'ny tsena CMS. Tsy mahagaga na manafintohina fa ny tetikasa isan-karazany dia tian'ny WordPress ho fitaovana fitantanana ny votoatiny. Wordpress no loharano misokatra, programa famoronana tranonkala voarakitra ao amin'ny PHP.
Michael Brown, manam-pahaizana ambony indrindra Semalt Digital Services, dia manome fomba fanao mahavariana momba izany.
Shopify no sehatra fampiantranoana, izay tsy mamela antsika hampiantrano ny tranokalantsika amin'ny servisy na mpiara-antokon'ny hafa tahaka ny GoDaddy sns. Amin'izay lafiny izay dia tsy mitovy amin'ny WordPress izany, ary miankina amin'ny Shopify server ho an'ny vohikalanay ary tsy afaka mampiantrano azy eo an-toerana. Ny sehatra fampiantranoana dia mitondra tombontsoa mahafinaritra, anisan'izany ny fitehirizana isan'andro, ny PCI complices, ny bandwidth tsy voafetra, ary koa ny SSL certificates avy amin'ny mpanome tolotra serivisy.
Mifanohitra amin'izany, ny WordPress dia manana trano fandraisam-bahiny. Midika izany fa afaka mametraka mora ny tranokalanao na blôginao ianao amin'ny servery rehetra ary afaka manitsy ny PHP rakitra araka ny fangatahanao. Fa raha manomboka miova ny raharaham-barotra, tsy ho mora aminao ny fividianana ny fandefasana ny bandwidth na ny mpamatsy fampiantranoana. Zava-dehibe ny manampy ireo plugins tahaka ny WooCommerce mba hahalalany tsara ny tranokalan'ny WordPress.
Ny singa fototra fototra:
Ao anatin'ireo rafitra fitantanana ny votoatiny, misy singa fototra. Fa raha ny WordPress dia azonao atao ny manampy ny karazana hafatra, pejy, sokajy, widgets ary zavatra hafa mitovy.
Tahiry manokana ho an'ny Tahirin-tsoratra ao amin'ny sokajy sokajy
Posts Multiple Articles
Pejy Pejy Tsongan-Dahatsoratra Nadika
Fanitarana ny fonctionnaire amin'ny WordPress:
Raha ny WordPress, azonao atao ny mametraka mora foana ny plugins, mametraka ny widgets sy menus, ary afaka manova ny lohahevitra hanitarana ny fonosana amin'ny tranonkalanao. Ohatra, ny out-of-the-box ao amin'ny WordPress dia tsy ahitana ny singa e-varotra, ka mila mametraka plugin WooCommerce ianao mba hahafahana mametraka ireo hafatra manokana sy e-commerce manokana.
Ny Shopify App Store:
Raha mpampiasa Shopify ianao dia tsy maintsy manitatra ny endri-javatra amin'ny fampiasana manokana. Ny apps Shopify indrindra dia ao amin'ny Shopify App Store. Raha te hampiditra app ianao dia tokony hiditra ao amin'ny sehatra Apps ao amin'ny menio Shopify ary tsindrio ny bokotra Visit Shopify App Store. Eto ianao dia afaka mifidy ireo fampiharana izay mety tianao hapetraka. Raha vao tafapetraka dia afaka mampiasa ireo apps ireo ianao ary mampiditra azy ireo ao amin'ny tranokalanao.
Structures theme templates vs WordPress theme structures:
Ao amin'ny WordPress sy ireo sehatra fitantanana votoaty toy ny Drupal sy Blogger, misy ny lohahevitra momba ny ray aman-dreny sy ny ankizy. Zava-dehibe ny mifidy lohahevitra mety ho an'ny tranonkalanao, hanomezana azy endrika tsara sy matihanina. Mifanohitra amin'izany kosa ny lohahevitra ao amin'ny Shopify dia tsy hivoatra mihitsy. Saingy tsy voatery hatahotra ianao satria afaka manavao azy ireo amin'ny fomba hafa. Ny loha-hevitra Wordpress dia tsy mampiasa ny fiteny fluid amin'ny fampiharana azy ireo, fa ny lamaodin'ny Shopify kosa mampiasa io fiteny io. Ny fiteny mandripaka dia ahafahan'ny mpamoaka entona mandingana ny votoaty ao amin'ny fivarotana. Zava-dehibe ny sori-dalànao ny sehatr'izy ireo, na inona na inona ampiasainao azy amin'ny WordPress na Shopify. Ny Storeify Store dia manaiky afa-tsy ireo rafitra directory ho an'ny lohahevitra raha toa ka afaka miasa ihany koa ny vohikala WordPress raha tsy izany.
Azo antoka ny filazana fa WordPress ny ankamaroan'ireo tranonkala sy bilaogy ao amin'ny aterineto ary manana endri-javatra mihoatra noho Shopify. Na izany aza dia azonao atao ny misafidy ny rafitra fitantanana ny votoatin'ny fikarakarana. Ho an'ny tanjona SEO sy ny fanamafisana araka ny tokony ho izy, WordPress dia tsara kokoa noho ny Shopify ary mahazatra kokoa. Ankoatra izany, ny fanovana ny fotodrafitrasa URL, permalink sy SEO mifandraika toy ny lohateny, famaritana, sombin-doko, sary marika, ary lohateny dia mora amin'ny WordPress fa tsy Shopify Source .